Noho ny pesta … : maty antoka ireo nikarakara fampisehoana | NewsMada
Noho ny pesta … : maty antoka ireo nikarakara fampisehoana
Nangina ny tanànan’Antananarivo sy ny manodidina, nanomboka ny fiandohan’ity volana oktobra ity. Foana avokoa ireo fampisehoana, anaty efitrano sy ankalamanjana, tetsy sy teroa.
Niteraka fatiantoka goavana ho an’ireo mpikarakara ireny hetsika ireny, izay efa nahazoana daty sy nanaovana dokam-barotra, izany.
Anisan’ireo nanamafy izany i Dadafara, mpiara-miasa akaiky amin’ireo tarika mpanao hiragasy, ary nikarakara adin-kiragasy tokony ho natao tetsy amin’ny kianjan’ny kanto, etsy Mahamasina ny 8 oktobra teo. “Volabe no efa lany tamin’ny dokam-barotra, satria raha ny afisy fotsiny ohatra no resahina, 2.000 Ar ny iray amin’ireny kanefa anjatony ny natao sy efa naparitaka”, hoy izy.
Etsy ankilan’izay, nitaraina koa ireo tropy tokony hiaka-tsehatra, satria efa nanaiky ny fifanarahana izy ireo ka tsy nihevitra ny handeha ho any an-kafa intsony. Marihina fa fotoana mbola mahabetsaka ny hiragasy, any amin’ny famadihana any ambanivohitra any, izao.
Manoloana ity olana ateraky ny fihanaky ny pesta ity, nanambara i Dadafara fa tokony ho nandray fepetra mialoha ny fanjakana. Izany hoe, efa fantatra ny fotoana itrangan’ity aretina ity, isan-taona ka tsara kokoa raha noraràna, volana maromaro mialoha, ny fanatontosana famoriam-bahoaka mandritra io fotoana io. “Tokony mifampitsinjo”, hoy izy.
Ankoatra izay, tsy tokony ho vonjy tavanandro ny fanadiovana sy ny famongorana ny aretina fa mandavantaona mihitsy, araka ny hevitr’ity mpikarakara fampisehoana ity hatrany.